Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Spain Sheekada Carruurnimada Mariano Diaz iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Markii uu bilaabay, waxaa lagu naaneysaa “bahalkii". Waxaan ku siinaynaa dabool buuxa oo ah Sheekada Carruurnimada ee Mariano Diaz, Taariikh nololeedka, Xaqiiqda Qoyska, Waalidiin, Nolosha Hore, Nolosha Shakhsiyeed, Hab nololeed iyo munaasabado kale oo caan ah laga soo bilaabo markii uu yaraa ilaa markii uu caan noqday.
Bal eeg, waxaan kuu soo bandhigeynaa Mariano Diaz Nolosha Hore iyo Kacsanaanta Weyn. Dhibcaha Sawirka: Ara.cat, AS, Diariogol iyo RealMadrid.
Haa, qof walba wuu ogyahay Mariano inuu yahay ciyaaryahanka Real Madrid kaasoo markii hore ahaa aan jeclayn LAAKIIN lagu aqoonsaday taariikhdaas quruxda badan (1-da Maarso 2020), maalintii uu laba jibaaray hogaanka Real Madrid kulankii ay 2-0 kaga adkaadeen FC Barcelona. Noocayaga 'Mariano Diaz's Biography' oo aad u xiiso badan. Hadda adoon sii dheerayn, aan bilowno.
Sheekada Carruurnimada Mariano Diaz:
Tani illaa hadda waa mid ka mid ah kuwii ugu horreeyay ee Sawirada Carruurnimada Mariano Diaz. Amaah: AS iyo diariogol
Mariano Díaz Mejía wuxuu ku dhashay maalinta 1aad ee August 1993 hooyadiis, Mariana Mejía iyo aabe, Mariano Díaz (jir dhise) waqooyi-bari ee Barcelona, ​​Spain. Kubadsameeyaha reer Spanish wuxuu ku soo koray walaalkiis ka weyn iyo walaashiis dhexdeeda Premiumà de Mar, oo ah magaalo Isbaanish ah oo loo tixgeliyo inay tahay xarun dalxiis iyo guri hoy u ah Barcelona.
As ASwe Website Waxaa dhigaya, waaliddiinta Mariano Díaz dhalashada wiilkooda waxay u yeeleen magaca 'Mariano DiazTanina waxay ka dhigeysaa qofka saddexaad ee magac ku qaata qoyskiisa. Ma ogeyd?… Laba ka mid ah waalidiinta Mariano Diaz- aabihiis iyo awoowe uu kujiro laftiisuba magacyo isku mid ah ayuu leeyahay
Markii uu ahaa caruurnimada, da 'yarta Mariano waxay waqti badan la qaadatay awowgiis kaasoo u noqday ciyaartoygii hore ee kooxda reer Catalan. Sababtoo ah isku dhawaanshahooda, ciyaarta kubada cagta si tartiib tartiib ah ayaa loo soo bandhigay isaga.
Sida laga soo xigtay hooyada Mariano Diaz, halka Mariano ay ciyaartay kubad markii ay ahayd cunug, darbiyada ku yaal guriga qoysku waxay soo gaareen dhibaato badan maadaama ay ku dheceen calaamadaha kubadaha. Waxay sidoo kale u sheegtay Marca in Mariano sidoo kale loo adeegsaday sofas ahaan goolashiisa. Fariiso oo is deji maadaama aan faahfaahin dheeraad ah ka bixin doono noloshiisii ​​hore ee Mariano Diaz ee kubbadda cagta qaybta dambe ee maqaalkan.
Mariano Diaz's Asalka Qoyska iyo Background:
Go'aan ka qaadashada muuqaalka wajiga kubada cagta, waxaad igu raacsan tahay in qoyska Mariano Diaz ay leeyihiin aqoonsi isku-dhafan. Runtu waxay tahay, mid ka mid ah waalidiinta Mariano Diaz- aabihiis waa saafi Isbaanish. Hooyadiis, dhanka kale, waxay ka timid Dominican Republic. Mariana Mejía waxay u dhalatay San Juan de la Maguana (magaalo iyo degmo ku taal gobolka galbeedka Jamhuuriyadda Dominican). Adoo kaliya eegaya sawirkan quruxda badan ee waalidiinta Mariano Diaz, waxaad si fudud u malayn kartaa cidda iyaga ka mid ah ayaa leh astaamaha ugu weyn ee Mariano qaadatay. HOOS KA DHIG
La kulan waaliddiinta Mariano Diaz- Aabihiis Mariano Diaz iyo hooyadiis, Mariana Mejia
Taariikhda Qoyska: Mariano Diaz wuxuu ka soo jeedaa qoys dabaqadda sare ah, oo uu aabihiis si diineed ugu shaqeeyay, isaga oo uga mahadcelinaya dakhliga ka soo galay meheradda jimicsiga. Xiligaas, ilaa iyo 1990-meeyadii, qoyska Mariano Diaz waxay ku tiirsanaayeen warshadaha jimicsiga Isbaanishka si ay u kasbadaan lacago ay ku sii wadaan.
Mariano Diaz's Caruurnimada-Sanadaha Hore ee Kubadda Cagta:
Ilmaha hore, Mariano wuxuu kubad la ciyaaray walaalkiis meel kasta oo uu kari karo. Thanks to awoowgaa iyo walaalkiis weyn, da 'yarta Mariano waxay bilaabeen jidkiisii ​​si ay u noqdaan kubbadda cagta xirfad leh laga soo bilaabo da' aad u yar. Markii warbaahinta Isbaanish (Marca) ay booqatay guriga qoyska Mariano Diaz ee dalka Spain, hooyadiis ayaa usheegtay waxa soo socda ee ku saabsan wiilkeeda hore ee kubad sameeyaha ah ee kubbadda cagta. Ereyadeeda;
“Mariano had iyo jeer walaalkiis ayuu guriga kula ciyaari jiray. Dib u dhis, darbiyada waxaa ku dhajiyay calaamadaha kubadaha oo sofas-ka waxaa loo isticmaalay sidii gool.
Waxaan had iyo jeer oran jiray ma iibsan doono fadhiga cusub ilaa ay weynaanayaan. Tani waa sababta oo ah haddii aan iibsado mid cusub ayay mar kale jeex jeexi lahaayeen. Xitaa asxaabtiisa waa isku mid markii uu shan sano jiray. ”
Hooyada Mariano korinta ciyaaryahanka.
Mariano Diaz's Bayoolajiga- Nolosha Xannaaneynta Hore:
Sannadkii 2002 wuxuu ahaa markii safarka lagu noqonayo xirfadle kubbadda cagta bilaabay Mariano. Tijaabooyin lagu guuleystey ayaa sanadkaas ku soo biiray isaga oo ku biiray liiska akadeemiyada ee Naadiga Dib Ucelinta Deportiu Espanyol, oo loo yaqaano sida Akadeemiyada RCD Espanyol. Markii ay ku soo biireen akadeemiyada, qaar badani waxay u arkeen Mariano inuu yahay nin akhlaaq wanaagsan oo dhawrsan.
Kani wuxuu ahaa kaarka Aqoonsiga akadeemiyadda Rano Espanyol ee Mariano. Heerarka: Diariolagrada
Intii uu ku sugnaa RCD Espanyol ee Alevín B, Mariano waxaa tababaray Lluís Planagumà Ramos. Waqtigaas ka dib, wiilka yar ayaa caan ku noqday socodkiisa oo loo arkay inuu yahay wanaagga ugu weyn. Xawaare weyn ayaa lala raacay caado ka ahayd inuu ka gudbo sumadiisa isla markaana ku sameeyo wax ka baxsan buluuga kubadiisa kubadeed. Ma ogeyd?… Mariano Diaz ayaa dhaliyay 41-gool xilli ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa ee akadeemiga isaga ayaa u horseeday inuu ku guuleysto Koobka Pichichi taas oo lagu abaalmariyay wakiil ka socda shirkad Spanish ah Aigua del Montseny.
Sawirka Carruurnimada Mariano Diaz - Waa kan isaga oo qaadanaya abaalmarin ahaan kubbadda cagta. Heerarka: Diariolagrada
Da 'yarkaan ayaa kooxda kusii joogay afar sano oo uu joogay MA AHAN dhammee boodhka weyn.
Xaqiiqda Taariikh nololeedka - Wadada loo maro Sheekada:
Mariano waligeed ma aysan marin marin sahlan oo ay ku marto kooxda Espanyol Infantil B intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2005-2006. In kasta oo aan midkoodna ka mid ahayn kuwa sida aadka ah u tafaxayd, haddana arrinta ugu weyn waxay ahayd “Dhererka". La'aantiis dhererka looga baahan yahay da 'yarta da’daas waxay la micno tahay khatar ku haysa joogitaankiisa kooxda.
Goorta Going Got Tough:
Markii la fiiriyo waqtigiisa ciyaarta oo loo yareeyay inuu si fudud u ciyaaro 15 daqiiqo ciyaar kasta, waalidiinta Mariano Diaz waxay go'aansadeen inay ficil sameeyaan iyagoo wiilkooda ka saaray kooxda. Waxay sii qoreen isaga oo leh akadeemiga Premium ee halkaas oo uu ku ciyaaray 2006 ilaa 2008. Sanad ka dib sanad uu la joogay kooxdiisi xigtay (Sánchez Llibre), da 'yarta ayaa ka soo yeeray Badalona halkaas oo uu ku soo afjaray waayihiisii ​​dhalinyaro ee 2011.
Mariano intii ay ku sugneyd kooxda Badalona koox sare ayaa mar kale qarxay. Waxaa lagu sifeeyay inuu aad ugu dhaqso badan yahay isla markaana aad u caqli badan xagga garoonka, oo ah nin yar oo ciyaara isku kalsoon. Arintaan ayaa soo jiidatay Real Madrid oo aan iska caabin karin laakiin aheyd inay heysato isaga 2011.
Xaqiiqda Taariikhda Nolosha - Rise to sheekooyinka Caanka Ah:
Sida akadeemiyayaal badan oo ka qalin jabiyay naadiyada yaryar, ku biirista Real Madrid waxay la micno tahay ku soo laabashada kubada cagta dhalinyarada. Weeraryahanka quruxda badan ayaa sameeyay shaqadiisa guri isaga oo u dhaliyay 50 gool akadeemiga Real Madrid kahor inta uusan u darin kooxda weyn ee tababare Zinedine Zidane. Dhaawac dhabarka u ah weeraryahan Karim Benzema ayaa arkay isagoo qaab ciyaareed wanaagsan soo muuqanaya. Laakiin sida ugu dhaqsaha badan Benzema ayaa u soo bogsaday, fursadaha ayaa ku yaraaday da 'yarta. Si kasta oo ay ahaataba, kaalintiisa ku aaddan ku guuleysiga koobabkan soo socdaa waxay ahayd wax qiimo leh.
Raaligelinta aadan aqoon, Beast wuxuu ku guuleystey ku dhawaad ​​wax walba oo uu la joogay Madrid
Ka dib markii ay ka caawisay Real Madrid sanadihii koobabka ee ay hayeen. Mariano 30-kii Juunyo 2017, Mariano wuxuu go’aansaday inuu isaga tago Spain si uu u helo khibrad dheeri ah oo kubada cagta ah. Waxa uu u saxeexay kooxda Olympique Lyonnais halkaasoo uu dhaliyay 18 gool xilli ciyaareed uu ku mahadsan yahay wada shaqeynta wanaagsan ee uu sameeyay Memphis Depay iyo Nabil Fekir (19 iyo 18 goolal siday u kala horreeyaan). Isagoo muujinaya inuu yahay mashiinka himilada dhabta ah, Real Madrid waxay go’aansatay inay gacmahooda fidiyo si ay dib ugu soo celiyaan ninkooda.
Mariano Diaz's Rise oo la ciyaaraya kooxda Olympique Lyonnais
Maalintii 29aad ee bishii Agoosto 2018, Mariano Diaz wuxuu ku soo laabtay Real Madrid waxaana lagu barakeeyey maaliyada No7 ee uu banneeyay Christiano Ronaldo. Mariano markiisii ​​labaad ee Madrid wuxuu ahaa mid qiimo leh ilaa iyo haatan. Mid ka mid ah waqtigiisii ​​ugu fiicnaa wuxuu yimid intii lagu jiray Elclassico, maalintii 1aad ee Maarso 2020. Markii uu keydka ka soo kacay intii uu socday, bahalkii ayaa laba jibaaray hoggaanka Real Madrid kulankii ay 2-0 kaga badiyeen FC Barcelona daqiiqaddii 90aad.
Xiddiga soo kacaya ayaa ka caawiyay in ay laba jibaarto hogaankeeda Real Madrid kulankii ay 2-0 kaga badiyeen FC Barcelona 1dii marso 2020 El Clasico
Mariano Diaz's Gabadha, Xaaska, iyo Cunugga:
Isaga oo kor u qaadaya inuu caan noqdo oo magac u yeesho kubada cagta, waxaa hubaal ah in taageerayaasha badankood ay jeclaan lahaayeen inay ogaadaan haddii nin guuleysta sida Mariano Diaz uu qabo gabar saaxiib ah, ama haddii uu runtii guursado, taasoo macnaheedu yahay inuu horay u qabo xaas. Runtu waxay tahay, wixii ka dambeeya kubbada cagta guuleysta, waxaa jira gabar saaxiibtinimo oo qurux badan oo magaca ku baxda Yaiza Moreno Antho.
Yaiza Moreno waa muunad iyo nashqadeeyaha dharka dabbaasha kaasoo shukaansanaya Mariano Diaz's illaa iyo 2012. aag qurux badan, mid ah Waxay kordhisaa kalsoonida qof kasta oo ka timaadda dabinkeeda.
La kulan gabadha Mariano Diaz, Yaiza Moreno- Miyaanay qurux badnayn? Dhibcaha: Instagram
Xiriirka Mariano iyo Yaiza ewuxuu si fudud u eegaa baaritaanka bulshada guud ahaan sababtoo ah waa bilaa lacag la'aan waana jacayl buuxa. Yaiza qurux badan runtii waa qof aan is jeclayn oo aan wax shaqo ah qabin mooyee si ay u siiso taageero shucuur ah ninkeeda, xitaa waxaad ka dhigan tahay inaad nolosheeda ku hakinayso.
Mariano Diaz Gabadheeda Yaiza Moreno waxay ku taageertaa ninkeeda waxkasta oo uu sameeyo. Dhibcaha: Pinterest
Waqtigii Mariano uu ku soo laabtay Real Madrid, malaayiin taageerayaal ah ayaa aragtidooda koowaad ee gabadha saaxiibka la ah inta lagu gudajiro bandhigiisa. Ka xukumaya sawirka hoose, way muuqaneysaa Yaiza leeyahay waxaa ogolaaday waalidiinta Mariano Diaz waalidkood. Tani waxay muujineysaa in arooskoodu uu noqon karo tallaabada xigta ee xigta.
Gabadha Saaxiibka ah ee Mariano Diaz Yaiza Moreno ayaa sawir qaaday intii uu socday bandhiga Madrid. Dhibcaha: Twitter iyo dakarflash
Mariano Diaz's Hab-nololeedka:
Barashada qaab nololeedka Mariano Diaz waxay kaa caawineysaa inaad hesho sawir wanaagsan oo heerka noloshiisa ah. Bilaabidda, haysashada qiime aad u sarreeya, qiime suuqeed ah 16 milyan oo euro iyo kasbashada mushahar sannadle ah oo ah 5 milyan oo euro (wakhtiga qorista) runti wuxuu ka dhigayaa kubad sameeyahan milyaneer ah. Shaki la'aan, Mariano waxay awoodaa inay ku noolaato nolol raaxo leh.
Isaga oo ka hadlaya qaab nololeedka, Mariano Diaz wuxuu ku nool yahay nolol habaysan Madrid. Haddii fursad la siiyo, uma xishoon doono inuu soo bandhigo hantidiisa waaweyn - guryo waaweyn (guryo waaweyn), dhar qurux badan, gacmo gashiyo, jaakadaha gaarka loo leeyahay, dayuuradaha iwm. Wadooyinka magaalada Madrid, waxaad u badan tahay inaad ku aragto Mariano labbisto celcelis ahaan iyo tan ugu muhiimsan, adiga oo wata baabuurkiisii ​​hore ee iskuulka oo casaan badan.
Waxay u egtahay Gaariga Mariano Diaz inuu yahay, wuxuu door bidaa qaabkii hore ee iskuulka
Marka laga reebo kubada cagta, Mariano sidoo kale waa darawal fiican. Ma ogeyd?… Wuxuu mar saddexaad dhammeystiray tartan-karting abaabulay kaas oo Audi. Waxa uu kaalinta saddexaad ka soo qabtay darawalada dhaqsaha badan; Nacho iyo Ramos.
Mariano Diaz's Nolosha Qofka:
Waa kuma Mariano Diaz bannaanka? Jawaabtu waa, he waa qof dareemaya inuu aad ugu qanacsan yahay dabeecadda. Hadaad jeceshahay doofaarro iyo xayawaanka, markaa keligaa ma tihid. Runtu waxay tahay, waxaad u badan tahay inaad ku farxi doonto inaad barato in Mariano waa adiga oo kale- A Die-Hard Pig iyo Shark lover.
Mariano waxay jeceshahay inay booqato meel lagu naaneeso “JannadaBahamas, halkaas oo uu kula macaamilo asxaabtiisa ugu fiican (hoos ka eeg). Yaa garanaya?… Mariano xitaa wey qaadan kartaa mid ka mid ah xayawaanadan.
Barashada nolosheeda gaarka ah ee Mariano Diaz marka laga tago garoonka ciyaarta. Dhibcaha: Instagram
Ugu dambeyntiina, noloshiisa gaarka ah ee Mariano Diaz, waa qof ku dhegan tixraaca uu jecel yahay kaasoo u socda sidan;
“Waxaa muhiim ah in markasta la fiiriyo halkaad usocto, halka aad raadin lahayd halkaad kujirtay”.
Mariano Diaz's Nolosha Qoyska:
Ciyaartoy badan oo kubada cagta ah, wadada loo maro qalad uma noqon laheyn wax lagu faani karo maaddaama aysan ka caawin xubnaha qoyska. Marka laga hadlayo qoyska, waxay umuuqataa in Mariano kali uusan ku barbaarin waalidkiis, laakiin sidoo kale ay la socdaan walaalkiis iyo walaashiisa quruxda badan. Qeybtaan, waxaan iftiin dheraad ah ku soo ridi doonaa waaliddiinta Mariano Diaz iyo xubnaha kale ee qoyskiisa qurxoon.
Waxa ugufiican ee Qoyska Mariano Diaz ee aan heli karno. Haddaba baaris ku samee qaab dhismeedka jirka aabihiis. Dhibcaha: Tumblr
Wax badan oo ku saabsan aabayaasha Mariano Diaz:
Isagoo ka jawaabaya muuqaalkiisa weyn ee sawirka kore, waxaad igu raacsan tahay in aabaha Mariano Diaz runtii uu u muuqdo mid dhisaya. Runtu waxay tahay, wuxuu mar ahaa horyaal Isbaanish ah oo sharaf ku leh kor u qaadista culayska.
Xitaa da'diisa, Mariano Diaz Snr wali wuxuu ku socdaa qolka jimicsiga Premiumà del Mar, gobolka ku yaal xeebta Catalunya oo uu wiilkiisii ​​Mariano ku dhashay. Isaga oo ka hadlaya saameynta aabihiis ku yeeshay shaqadiisa, Mariano mar ayuu yiri;
“Waqtiyada ugu badan waxaan aabahay la tagaa jirdhiska. Mahadsanid isaga, waxaan bartay inaan sameeyo leylisyo iyo jimicsi ka hortag ah oo dhaawac ah, kuwaas oo dhammaantood ku fiicnaa mustaqbalkeyga ciyaareed. ”
Waxbadan oo ku saabsan Hooyo Mariano Diaz:
Hooyooyinka waaweyni waxay soo saareen wiilal kubbadda cagta oo guul leh Mariana Mejía ka reebanna. Waxay u dhalatay San Juan de la Maguana (magaalo iyo degmo ku taal gobolka galbeedka Jamhuuriyadda Dominican) dhalashadeeda iyo dhalashadeeda.
Ma ogeyd?… Labada waalid waalidkood Mariano Diaz, waa Mariana Mejía oo leh hiddo-wadaha ugu weyn iyadoo wiilkeeda iyo gabadheeda ay qaateen midabkeeda maqaarka. Sawirka hoose, Mariana iyo Mariano labaduba waxay ku wada nool yihiin xiriir muuqda oo muuqda.
La kulan Mariano Diaz hooyadeed- Mariana Mejía- Labaduba waxay umuuqdaan kuwo is dhow dhow. Amaah: Dood-wadaag
Waxbadan oo kusaabsan Ayeeyada Mariano Diaz:
Mariano awowgiisa weyn waa la doorbidayaa Mariano Diaz Snr 2. He waxay mas'uul ka tahay kubada cagta si qoto dheer u gasho khadka dhiigga ee qoyska. La'aantiisa, Mariano ma uusan noqon laheyn ciyaartoy kubada cagta. Xaqiiqdii, dabeecada aan la dhiibin wuxuu ka yimid awowgiisi hore, kubad horay u ahaan jirtay kubada cagta iyo anshax mar mar u soo ciyaaray koox ka dhisan gobolka Catalan.
Wax badan oo ku saabsan Walaalaha Mariano Diaz:
Mariano Diaz wuxuu leeyahay walaalkiis kala bar ah oo magacooda la yiraahdo Eduard Marcel Núñez (kor ku sawiran). Si la mid ah Mariano, sidoo kale waa ciyaaryahan kubada cagta u ciyaaraya CE Vilassar de Dalt. Kani waa koox kubada cagta ah oo kutaala tuulo ku taal gobolka Catalonia, Spain (gobolka Barcelona).
Sidoo kale inaan kula socodsiino, Mariano walaalkiis kala bar Eduard Marcel Núñez waa walaal ka yar xubin kale oo qoyska ka tirsan oo lagu magacaabo Pedro Antonio Núñez. Pedro, wuxuu sidoo kale kubad ku dhashay Hato Mayor del Rey, Dominican Republic.
Wax badan oo ku saabsan Walaasha Mariano Diaz:
Adoo ka fekeraya sawirka qoyska hoose ee kor ku xusan, waxaad nala aqbali doontaa in ay u muuqato in Mariano ay leedahay walaas, oo ah sida walaalaheeda kale ay qaateen kadib hiddo-wadaha hooyadeed.
Mariano Diaz's Xaqiiqda Aan La Sheegin:
Xaqiiqda #1: Isku-dayga Boobka:
Mariano Diaz ayaa mar dhibane u ahayd isku day dhac. Dhacdadan ayaa dhacday ka dib markii uu booqday dukaan qaali ah oo ku yaal Calle Serrano Street, Madrid (Warbixinta Websaydhka Ronaldo).
Intii lagu socday wadada isagoo sita boorsooyin shey ah oo uu hadda iibsaday, qof ayaa u yimid isaga oo si xoog leh isku dayay inuu xado boorsooyinka. Ka dib markii uu u qayliyey caawimaad, tuhmanaha ayaa markaa u cararay dhinaca kale ee wadada. Laba qof ayaa daba orday kadib markii tuhmanaha tuugada ka xaday Mariano. Kadib markii uu awood roonaaday, wuxuu ku dhammaaday inuu bacda ku tuuro dhulka. Tan waxaa ku xigtay Mariano kor u qaadday oo ka tagtay goobta iyada oo aan u oggolaan faragelin booliis.
Xaqiiqda #2: Wuxuu ka tagay inuu u ciyaaro Dalkiisii ​​Hooyo:
Mariano mar waxay aqbashay u qalmida inuu u ciyaaro Dominican Republic hooyadiis. Sidaas darteed, wuxuu saftay kulankiisii ​​ugu horreeyay ee caalami ah 24-kii Maarso 2013 ciyaar saaxibtinimo oo ay la ciyaareen Haiti, isagoo dhaliyay goolkii ugu dambeeyay ee ay 3-1 kaga badiyeen.
Ma ogeyd?… taasi waxay u badan tahay ciyaartiisii ​​ugu dambeysay ka hor inta uusan go’aansan inuu iska dhiibo waddankiisii ​​hooyo. Mariano ayaa taas sameysay si aysan u dhicin xirxiran iyo sidoo kale, marka la fiiriyo suurtogalnimada xulka qaranka Spain ee soo yeeraya. Horumarkaani wuxuu ka dhigay inuu ka gaabsado casumaadaha kale ee ka imanaya waddankiisii ​​hooyo.
Xaqiiqda #3: A Julia Roberts Fan:
Dunida caanka ah ee Hollywood, Real Madrid waxay kasbatay awood. Ma ogeyd?… Julia Roberts waa mid ka mid ah taageerayaasha caanka ah ee kooxda oo mar la kulmay Mariano. Hoos waxaa ku sawiran iyada iyo Mariano Diaz mid ka mid ah booqashadeeda caasimada Spain.
Xiddiga Real Madrid ayaa mar la kulmay Julia Roberts. Dhibcaha: Instagram
Xaqiiqda #4: Mushaharkiisa Mushaharka:
Tan iyo markii uu ku soo laabtay Real Madrid, taageerayaasha waxa ay bilaabeen inay ka baaraandegaan xaqiiqda Mariano Diaz, sida inta uu ku kasbado isaga oo ah Isbaanish weyn.
29kii Agoosto 2018, Mariano wuxuu heshiis shan sano ah qalinka ugu duugay Real Madrid, kaasoo mid ka mid ah uu arkay isagoo jeebka ka shubanaya mushahar ka badan € 4million sanadkiiba. Jebinta mushaharka Mariano Diaz ee tirooyinka yaryar, waxaan haynaa waxyaabaha soo socda.
Daqliga Euro (€)
Dakhliga kujira Suuqgeynta (£)
Daqliga ku soo gala USD ($)
Sanadkiiba € 5,000,000 £ 4,294,250 $ 5,643,100.00
Per Month € 416,666 £ 357,854 $ 470,258
Asbuuciiba € 104,116 £ 89,463.5 $ 117,564
Maalintii € 14,881 £ 12,780.5 $ 16,795
Saacadiiba € 620 £ 532.5 $ 699
Daqiiqaddii € 10.3 £ 8.86 $ 11.6
Sekankiiba € 0.17 £ 0.14 $ 0.19
Tani waa inta ay soo qaadatay Mariano Diaz tan iyo markii aad bilaawday daawashada Boggan.
Ma ogeyd?… Celcelis ahaan shaqaalaha Spain waxay u baahan yihiin inay shaqeeyaan ugu yaraan 2.3 sano si ay u kasbadaan € 333,333 taas oo ah lacagta aynnu iska leennahay Mariano Diaz bishii hal bil gudaheed.
Xaqiiqda #5: Mariano DiazTattoos:
Mariano wuxuu rumeysan yahay dhaqanka tattoo-ga oo aad looga jecel yahay adduunka isboortiga maanta. Sida hoos ku xusan, Kubadda cagta Los Blancos wuxuu leeyahay tattoos muujinaya diintiisa iyo waxyaabaha uu jecel yahay.
Tattoos Mariano Diaz- Kubbad sameeyaha waxaa ku yaala tattoos badan gacantiisa bidix. Dhibcaha: Instagram
Xaqiiqda #6: Mariano DiazDiinta:
Adiga oo ka xukumaya sawirada tattoo ee Mariano Diaz ee kor ku xusan oo leh sawirka Maryan ee bikradda ah, waxaad igu raacsan tahay in waalidkiis ay u badan tahay inay isaga ku barbaariyeen diinta Masiixiga ee diinta masiixiga Bacriminta.
Mariano Diaz's Wiki:
Ugu dambeyntiina, Taariikh nololeedka Mariano Diaz, waxaan kuusoo bandhigaynaa wiki aqoontiisa wiki. Jadwalka hoose wuxuu kaa caawin doonaa inaad u hesho macluumaadka ku saabsan isaga hab fudud oo fudud.
Xaqiiqda Bayoolajiga Mariano Diaz (Weydiimaha Wiki)
Magaca buuxa: Mariano Díaz Mejía.
Taariikhda iyo Goobta Dhalashada: 1 Agoosto 1993 (oo ah 26 jir), Premiumà de Mar, Spain.
Waaliddiinta: Mariano Diaz Snr (Aabe) iyo Mariana Mejía (Hooyo).
Walaalo Eduard Marcel Núñez (walaalkiis badh) iyo Walaalo ah
Asalka qoyska Isbaanish (dhinaca aabaha) iyo Dominican Republic (dhanka hooyada)
Dhererka: 1.80 m (5 ft 11 gudaha)
Miisaanka: 76 kg
Shaqada: Kubad sameeyaha (Weeraryahan)
Maamuusayaasha (Sida oo kale Maarso 2020) Horyaalka La Liga: 2016–17,
Supercopa de Espana: 2019-20,
Koobka Kooxaha Kubadda Cagta FIFA: 2016.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay akhrinta sheekadayada Taariikhda Carruurnimada Mariano Diaz Plus Xaqiiqooyinka Taariikhda Nolosha ee Untold. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo cadaalad. Haddii aad hesho wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya xagga hoose. Waxaan markasta qiimeyn doonnaa oo xushmeyneynaa fikradahaaga.
Alvaro Morata Sheeko xariir ah oo sheeko xariir ah
Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 17, 2020
Toni Kroos Sheeko Xeel dheer oo Xogta Lahaa Xogta Lahaanshaha
Jose Mourinho da 'yada Halyeeyga Sheeko Xogta Warka Xogta